Ciidamada Xoogga dalka Somaliya oo ku sii siqaya Deg. Jamaame & Wararkii ugu dambeeyay | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidamada Xoogga dalka Somaliya oo ku sii siqaya Deg. Jamaame & Wararkii...
Ciidamada Xoogga dalka Somaliya oo ku sii siqaya Deg. Jamaame & Wararkii ugu dambeeyay
Jamaame (Halqaran.com) – Ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxay ku sii siqayan Degmada Jamaame ee Gobolka Jubbada Hoose, ka dib markii ay isaga baxeen mintidiinta Al-Shabaab.
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa waxaa hawlgalkan ku wehlinaya Xoogaga Daraawiishta Jubbaland iyo ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee Kumaandooska Danab, balse hawlgalkan qayb kama ahan Xoogaga Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland Cabdinuur Ibraahim Xuseen, oo galabta shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Kismaayo ayaa sheegay in Ciidanka Xoogga Dalka uu ku sii siqayo Degmada Jamaame.
Cabdinuur Ibraahim Xuseen, ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada oo si taxadar leh ku socdo ay hawlgalo amni xaqiijin ah ka sameeyen deegaano hoos-tagga Degmada Jamaame, kuwaa oo laga xusi karo Maleeley, Baladul Raxma, Bandar Jadiid, Koban iyo Maana Muufo.
Afhayeenka oo soo hadalqaaday hawlgalka afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyay socday ayaa ka dhawaajiyay in lagu dilay sideed ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab, tiro badana looga dhaawacay. Waxa uu intaa ku daray in Shabaabku ay dhaaawacyada u qaateen dhinaca Degmada Jilib.
Waxa kaloo uu sheegay in Shabaabku uu isaga baxay Degmada Jamaame, ka dib markii uu dareemay gulufka baaxadda leh ee kaga soo wajahan Ciidanka Xoogga Dalka.
“Waxay isaga baxeen Degmada Jamaame markii ay dareemeen culeyska iyo awoodda ciidamada.” Ayuu yiri Afhayeenka Wasaaradda Amniga Jubbaland.
Afhayeenka ayaa ku waramaya in saacadaha soo socda uu umadda Soomaaliyeed soo gaari doono qabarka sheegaya in Ciidanka Xoogga Dalka uu la wareegay gacan ku haynta Degmada Jamaame.
“Hawlgalka si dardar leh oo wanaagsan ayuu ku socdaa, waxaana rajeynaya haddii Alle idmo, waqtiyada inagu soo aadan warka hadda aan umadda Soomaaliyeed u sheegeyno war ka sii farxad badan inuu soo siyaado.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Ugu dambeyn, haddii ay suurta-gasho in Ciidanka Xoogga Dalku uu la wareego Degmada Jamaame ayaa waxay noqoneysaa markii ugu horeysay oo Al-Shabaab laga saaro degmadaasi, mudadii saddexda iyo tobanka ahayd, ee ay dalka ka dagaalamayaan.
Ciidamada Xoogga dalka Somaliya oo ku sii siqaya Deg. Jamaame